Digniin: Isticmaalka moobeelka oo qatar weyn kuu keeni kara, maxaa xal ah? | Somaliska
Digniin: Isticmaalka moobeelka oo qatar weyn kuu keeni kara, maxaa xal ah?
Isticmaalka badan ee moobeelka ayaa dhaqaatiirta Sweden ay sheegeen in uu dadka u keenay aragooda oo xumaaday. Dad badan oo maalinkasta isticmaala moobeelka iyo computerada saacado badan ayaa waxay ka cabanayaan in uu xumaaday aragooda fog oo aysan si fiican wax uga arag masaafada dheer. Taasi ayaa loo eedeeyay isticmaalka badan ee shaashadaha.
Per-Åke Östman oo ah dhaqtarka indhaha ayaa sheegay in ay aad u soo korodhay tirada dadka ka sheeganaya aragooda oo xumaaday, isagoo taasi ku eedeeyay in ay moobeelka aad u isticmaalaan oo wajiga ku dhaweeyaan. Isagoo intaasi ku daray markii uu qofku muddo moobeelka isticmaalo, oo uu ka dibna meel dheer fiiriyo in uu dareemayo in uu aragiisa xumaaday.
Åsa Nilsson oo iyaduna ah dhaqtarka indhaha ee hospitaalka Norrlands universitetssjukhus ayaa SVT u sheegtay in ay bilaabeen in ay daawo iyo ookiyaale u qoraan dadka dhibaatadaan haysato, iyadoo sheegtay in maalinkasta saf loogu jiro hospitaalka taasina ay sabab u tahay isticmaalka moobeelka iyo shaashadaha kale.
Dr Östman ayaa sheegay in uu aad uga xunyahay xaalada ay ku socoto bani’aadamka isagoo sheegay in aanahay dad loo abuuray in ay isticmaalaan dabiiciga oo ay cagaarka daawadaan balse hadda aan ku socono waddo qatar ah oo aan dhamaanteen ku indho beeli karno.
Xalka ayaa ah in aad iska yareyso isticmaalka moobeelka iyo shaashadaha kale, oo aadan qaasatan ku isticmaalin goobaha mugdiga ah iyo marka aad seexanayso. Hadaba haddii aad isticmaasho moobeelkaaga, ogoow in aad qatar ugu jidho in aad noqoto indhoole.
Aniga ayaa kamid ah dadka aragoodu yaraaday oo aad u isticmaalo shaashadaha somalia markii aan joogay waxaan aad u isticmaali jiray computer-ada oo xitaa shaqadeyda aan quudka ku helo ayey aheeday kadibna markaan qurbaha imaaday waan sii waday 6-sano oo udabeeyay aragtideydu aad ayey uyaraatay ilaa hal il gaarto meeshii ugu dabeeysay waxaanan ogaaday in hadii aanan isticmaalin mudo computer ama mobile arsgeygu soo fiicnaanayo xitaa cimiladan yurub waa kamid oo mar aan africa tagay isbedel ayaan ku arakay oo ookiyaalaha isticmaalo uma baahdo markii aan africa isbuuc joogo saas markaan ogaaday kadib waxaan iska xadiday isticmaalka badan ee mobile-ka iyo shaashadaha waxaanan cunaa cuntooyin qudaartu kubadantahay alx hada waanan fiicanahay dhaqaatiirtuna ookiyaalo leey qoray aad ayey iisaacideen oo waxeey arageyga kuhaayaan meel siman oo uuna hoos udhaceynin waxaan idiinka digaa inaadan fariintan dheelsanaha waxaan ahay walaalkiin arkay oo kunool arintaan soomaaliyeey ubadkiina iyo adinkaba xadida isticmaalka qalabkan waxaana ugu daran marka shaashada mobile-ka jabto joojiya isticmaalkiisa oo qalab orginal ahna ku badasha Alle ayaan caafimaad weydiisaneynaa wanaagsan anaguna waa inaan dadaalnaa
from 2008 ilaa hadda ayaan mobilka la dhafrayaa habeenki arageyda aad buu udaciifay 3 jeer ayan tagay dhaqtarka oo ookiyaalo la iiso qoray runtii ana qiraya argeeeygu aad buu daciif uyahay xitaa classka gadaal sabuurada hal xaraf xita kama arkayo bila ookiyaaalo
Isticmaalka mobilada iyo ipadka balwad qatar ayee noqotay..qoysaska qaarkood waqti iskuma helaan, cunuga wuxuu mashquul kuyahay mobilkisa, habarta ipadka, odeygana dhinaciisa ayuu kaga jiraa mobilka. War liskuma haayo. Tan labaad hada shilkii ayaa soo batay, dad lugeeynayo mobilkana kumashquulsan kadibna war uma hayaan baaburta iyo wadada eey socdaan.
dadka aadaaha casrigaa soo sameyey ayaa hadana laga rabaa in ey xalkeenaan